Funa unikezelo lweenkonzo zoluntu olungenamakhwiniba kuMaspala we-City of Cape Town ngoku - Amanda.mobi isiXhosa
Funa unikezelo lweenkonzo zoluntu olungenamakhwiniba kuMaspala we-City of Cape Town
500 signatures iyafuneka
Wawukhe weva okanye wabona izivumelwano zomsebenzi phakathi kukaMaspala we-City of cape Town neenkampani eziqashelwe ukwenza umsebenzi naye (ii-Service Delivery Agreements) kunyenee-Municipal Services Partnership Agreements (MSPAs)? Awazi ukuba yintoni oku? Isk’ingathi abo sibonyulela ukusimela njengeeNkonkeli barhalela ukuba sihlale singazi nto malunga noku. i-Municipal Systems act ithi ezi zivumelwano zomsebenzi neenkampani zifanele kukupapashwa zaziwe ngabantu  ukuze abantu abafana nam nawe bangatsho bazi ukuba ngubani, owenza ni, nini, kwaye oko akwenzayo kubiza malini.
Kodwa uyakufumanisa ukuba oku akwenziwa ngooMaspala bethu zwelonke. Oku kubangela ukuba uboqhophololo norhwaphilizo bande. Kodwa singakutshintsha oku. Njengokuba amabhunga eedolophu sele esekiwe, masiqinisekise ukuba iinkokheli zethu ziyazi ukuba oku kubalulekile kwaye sizimisele ukuqinesekisa unikezelo lweenkonzo zoluntu olungenamakhwiniba ukuze silwisane norhwaphilizo. Xa sithetha ngazwi-nye singabantu base City of Cape Town ngazo zonke izinto ezidl’umzi ezayamene ikakhulu nentlalo-ntle yoluntu kunye nobulungisa, siba namandla okuqinisekisa ukuba abo basiphetheyo bayazigcina izithembiso zokwenza impilo yabantu ngcono kwaye benza izinto ezinxamnye nobulungisa.
SoDolophu Patricial De Lille no Mphathi-Maspala Achmat Ebrahim ababekekileyo
Thina singabantu baseCity of Cape Town simemelela kuni ukuba nizibophelele ekutheni nakulwazisa uluntu ngezivumelwano zomsebenzi phakathi kuka Masipala weCity of Cape Town neenkampani eziqashelwe ukwenza umsebenzi kulo Masipala. Oku kuyakuqinisekisa ukuba akubikho makhwiniba nazintsolo ezibhekiswe kuMaspala. Xa unxibelelwano phakathi kwenu nabo banonyulileyo lungomelelanga, oku kungabangela iyantlukwano yandise nomsantsa ongade ukhokelele ekuchasweni kwako konke enikwenzayo ekuhlaleni ngabantu. Kubalulekile ke ngoko ukusebenzisana noluntu kwaye nizame ngandlela zonke ukubaquka kwimizamo eniyenzayo ekuphuculeni imeko zabo kunikezelo lweenkonzo. Ngalo ndlela sakube siqinesekisa ukhuseleko lwako konke osekwenziwe kuphuhliso loluntu.
Singaluphucula unikezelo-lweenkonzo eluntwini kwaye silwe norhwaphilizo ukuba uMasipala wetthu wase City of Cape Town angapapasha ii-Service Delivery Agreements (SDAs) zaziwe luluntu lonke lwendawo. Abanye osoPolitiki, abasebenzi kunye noosomashishini bayakoyika ukukwenza oku, kodwa ukuba abanto bayifihlayo, kutheni bengazibopheleli ekwenzeni oku? Xhasa umkhankaso omemelela uSodolophu uPatricial De Lille kunye noMpathi-Masipala u-Achmat Ebrahim ukuba benze oku.